Verse 1: Tsy zavatra an-tsaiko ianao nahazo indray mipi-maso? Soapbox swag, Vao tonga teo amboniny no nitoerako tany ireo gadra ary reraka aho izany (Car tabataba) I know...
Intro: (Natalie) Hitako ianareo no tianao mijery ny zavatra hitanao? Mpitovo aho? tsara, sorta kinda Angamba Inona no anananao ao an-tsaina? Your face looks familiar I see you all...
Verse 1: Boy I hopped out the grave good morning I been sleeping for too long I’m yawning Everybody talking trying to see me, Toy ny tsy finoana ny teny izay nataony miaina? He was six feet...
Intro / santionany: Hold up, haingainareo ambony Aoka aho hahazo iray hafa (Avereno 4X) Verse: Ankizilahy fantatrao no nahazo azy ireo ny J, Hanozongozona azy ireo ny tongotro nakarina tao amin'ny firohotana, my closet ain’t...
Intro: Oh, tiako ianao, Yeah Like tsy misy hafa, Eny Rehefa mahita anao mitsiky isehoanareo tahaka ny vanin-taona mafana, Eny Verse 1: You know that feeling when them words fail It’s...